Global Voices teny Malagasy » Tafaverina tamin’ny Fihaonamben’ny Global Voices Niaraka Tamin’ny Hevi-baovao Hianatra Fiteny Vaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Desambra 2017 14:34 GMT 1	 · Mpanoratra Gwenaëlle Lefeuvre Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sary avy amin'ny mpanoratra. “Nanana fomba fijery lalina sy sarotra mba hizarana ny fomba fiasan'ny aterineto (izany hoe ny tontolontsika) ireo mpandray fitenenana Arabo, Zapoteco sy Espaniôla. Nahazoana alalana.
Tany am-piandohan'ny volana Desambra, nody aho rehefa avy namonjy ny Fihaonambe  izay nokarakarain'ny Global Voices tao Colombo, Sri Lanka. Nandika (amin'ny ankapobeny) lahatsoratra avy amin'ny teny Anglisy ho amin'ny teny Frantsay nandritra ny 3 taona sy tapany aho, ary sambany tafahaona mivantana tamin'ireo mpikambana sasany, tahaka ireo mpanoratra maro izay efa nadikako ny lahatsorany. Sarobidy ny fahafahako nisaotra azy ireo mivantana
Saingy ho ahy, niteraka fiheverana momba ny hevitry ny ‘tontolo manerantany’ ihany koa iny herinandro iny.
Mpandray anjara maherin'ny 100 avy amin'ny firenena 80 izahay, anisan'izany i Bolivia, Palestina, Somalia, Afghanistan ary Jamaika. Ka ity ny zavatra voalohany: ny dikan'ny manerantany dia ny olon-drehetra. Tsy ny olon-drehetra avy amin'ny firenena mandroso sy tandrefana ihany. Fa ny olon-drehetra.
Vokatr'izany: rehefa mametraka ireo olona rehetra ireo amin'ny efitra iray ianao, dia tsy azonao heverina fa mahay teny anglisy avokoa ny rehetra. Raha ny marina, dia mety tsy mitovy lingua franca  izahay (ohatra, miteny anglisy aho fa tsy Espaniôla, izay metimety kokoa, sy manaja kokoa). Ary na dia eo anivon'ireo izay afaka miteny na mahatakatra ny teny anglisy aza, miovaova be ny hafainganam-piteny.
Noresahana nandritra ny hetsika ny adihevitra momba ny sakana amin'ny tenim-pirenena maro. Nanatrika fihaonam-be iraisam-pirenena maromaro aho nandritra ny fiainako hafa, saingy nahatsapa fa tany Colombo, nihevitra ny rehetra fa afaka mifampiresaka amin'ny teny Anglisy izahay. Fa tsy izany.
Sary avy amin'i Raphael Tsavkko Garcia. Mitsangana miaraka amin'ireo mpandray anjara sy mpandika teny ato amin'ny Global Voices avy any Ginea, Makedonia, Ejipta ary Gresy ny mpanoratra (afovoany). (CC BY-NC-Na D 2.0)
Na dia eo aza ny teny filamatra isan-karazany amin'izao androntsika izao, dia tsy inona fa izao tontolo izao ny tontolontsika. Ny monina mifanakaiky dia tsy mitovy ny miara-miaina. Amin'ny voalohany, tsy miraharaha ny hafa isika, amin'ny faharoa, miady sy mampanndroso ny tenantsika sy ny hafa miaraka amin'ny fahasamihafantsika isika
Ny Manerantany (Izao tontolo izao) dia midika hoe mampiasa ny fotoanantsika: miteny miadana sy tsotra mba hahafahan'ny tsirairay mahatakatra ny zavatra lazainao sy ny fahafahana mangataka fanazavana. Ny dikan'ny hoe Manerantany dia mihaino am-pahamarinana sy amim-paharetana. Midika hoe manolotra mpandika teny amin'ny fotoana sy toerana ilaina ny Global (manerantany). Izany rehetra izany no ahafahantsika mifantoka amin'ny hafatra fa tsy amin'ny mpitondra hafatra. Mizàtra maneho fanajana ny Global (donia=izao tontolo izao).
Sarotra? Eny. Saingy rehefa vita ny ezaka … misokatra izao tontolo izao.
Gwenaëlle Lefeuvre dia tonian-dahatsoratra ato amin'ny Global Voices Lingua Frantsay. Farmasiana, mpandihy, bila ogera  izy, ary mpiaro fiteny vitsy an'isa ao amin'ny Academie Du Gallo. . Azonao atao ny manaraka azy ao amin'ny Twitter @DiffractedWord .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/31/112024/
 lingua franca: http://thediffractedword.org/language-advocacy/english-is-everywhere-so-what/
 Academie Du Gallo.: https://twitter.com/AcademieDuGallo